Amathikithi Wencwadi, Uhambo Nemisebenzi Yomhlaba Wonke Ngengoma Nama-Tiqets - World Tourism Portal
Amathikithi Encwadi, Uhambo Nemisebenzi
Okomhlaba Wonke Ngengoma kanye nama-Tiqets
Ngokufinyelela kwe- "Musement" ne "Tiqets" kusuka kuleli khasi, ungathola amathikithi emicimbi eminingi emhlabeni wonke ngamanani amakhulu.
Yonga imali ngokubhuka kusenesikhathi futhi uvikele imigqa ngamathikithi akho weqa.
Amathikithi Wencwadi, izinkambo Nemisebenzi Yomhlaba Wonke Ngesihlabelelo & Tiqets. Sesha amapaki wezingqikithi, izinkambo, iminyuziyamu namathikithi emisebenzi evela kuwo wonke umhlaba bese ubhuka amathikithi manje ngokuchofoza okumbalwa. Yonga imali ngokubhuka kusenesikhathi futhi uvikele imigqa ngamathikithi akho weqa.
Uhlobo lwenkonzo: Amathikithi amabhuku wamapaki wezingqikithi, izinkambo, iminyuziyamu kanye nezigodlo, imisebenzi eyenziwa yiTiqets neMusement